Antson’ny Irakiana ho an’ny Governemanta Hanampy Trano Fitaizana Zaza Kamboty Iray Mifototra amin’ny Zavakanto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Oktobra 2017 5:53 GMT
Vakio amin'ny teny Español, عربي, Italiano, كوردی, English
Pikantsarin'ny antsafa iray nifanaovana tamin'i Hisham al-Dhahabi, nivoaka tao amin'ny YouTube ho ‘Hiwar al Taseaa miaraka amin'i Ali al-Muhana’ tamin'ny 11 Oktobra 2017 avy amin'ny fantsona Hona Baghdad.
Nahazo laza tao Iràka ny fanentanana media sosialy iray vao haingana mandrisika ny governemanta hanome sombintany ho an'ny Trano Irakiana Azo Antoka Hamoronan-Javatra, trano fitaizana zaza kamboty tsy miankina iray mampiatrano ireo ankizin'i Iràka marefo indrindra.
Tao amin'ny antsafa iray (manomboka any ho any amin'ny minitra faha-32 any ho any) nifanaovana tamin'ny Hona Baghdad, fantsombaovao iray amin'ny fiteny arabo, navoakan'i Hisham al-Dhahabi, tale sady mpanorina ny Trano Irakiana Azo Antoka Hamoronan-Javatra ny tolotra nataon'ny Monisipaliten'i Baghdad hanome sombintany ho an'ny fikamanany. MIkatso ao amin'ny biraon'ny praiminisitra Haidar al-Abadi miandry ny fankatoavana avy aminy anefa izany fifanarahana izany.
MIantso ny praiminisitra i Al-Dhahabi hanasonia izany fifanarahana izahy ahafahan'ny fikambanana manomboka ny fanitarana ny toeram-pikarakarana.
Malaza ao Iràka amin'ny asam-panasoavana ataony amin'ny ankizy kamboty, tsy misy mpiahy ary tsy manam-ponenana i Al-Dhahabi, psykôlôgy tsara ofana iray. Nanomboka ny asany tamin'ny ankizy marefo tao amin'ny sampan'ny fikambanana kiorda iray antsoina hoe Fiarovana ny Zanak'i Kiordistan izy tamin'ny taona 2004.
Tamin'ny taona 2006, nisy namono nandritra ny fotoana nampiakatra ny herisetram-pivavahana ny mpikambana iray tao amin-dry zareo ka nitarika ny fikambanana hanakatona ny biraon'ny sampana. Raha tokony hamindra ny ankizy ho any amin'ny fitaizana zaza kamboty tantanan'ny fanjakana tsy mandeha amin'izay laoniny izy dia naleony nandray ny andraikitra hikarakara azy ireo sy nanangana ny Trano Irakiana Azo Antoka Hamoronan-Javatra.
Tsy vitan'ny mampiatrano ireo ankizy niangarana ihany ny fikambanana, fa mikarakara azy ireo amin'ny alalan'ny fomba fitsaboana mifototra amin'ny zavakanto ho fomba iray hiatrehana ny ratra nahazo azy ireo. Nomena kilasy fianarana zavakanto sy hira ny ankizy hampivelarana ny talentam-pamoronan-dry zareo, ankoatra ireo fahaizana hafa azo ampiharina kokoa tahaka ny fanaovam-bolo, fanjairana ary ny fahandroana sakafo. Amin'izao fotoana izao ny fikambanana dia mampiatrano zaza 4 ka hatramin'ny 20 taona miisa 45.
Tsy mora velively ny ezaka nataon'i Al-Dhahabi hanohanana ireo ankizy tsy misy mpiahy. Tamin'ny taona 2011 nisy lahatsary fanadihadiana iray mitondra ny lohateny hoe “Eo An-tsandrin'ny Reniko” nanasongadina ny fahasarotana natrehiny tamin'ny fananganana ity akany azo antoka ity. Kely ny fanampiana azony avy amin'ny governemanta, fa ny fanomezana avy amin'ny tsy miankina no nianteherany.
Tamin'ny fiandohan'ity taona 2017 ity, nankatoavina tao Dubai nandritra ny Lanonana Arabo Mpamelona Fanantenana ny asan'i al-Dhahabi, izany dia hetsika iray manome voninahitra ireo mpitarika manome aingam-panahy indrindra ao amin'ny tontolo arabo ka nanokana ny fiainany tamin'ny fanampiana ireo niangaran'ny vintana ka manome ny tsaratsara kokoa ho an'ny fiarahamoniny. Iray amin'ireo dimy nahazo loka mitentina 1 tapitrisa dirhams Emirà Arabo Mitambatra (tokotokony ho 272.000 dolara amerikana) izy ho fanohizana ny asam-panasoavana ataon-dry zareo. Ny kinasan'i Al-Dhahabi amin'ny fampiasana ny vola azo amin'ny loka dia ny hananganana toerana vaovaon'ny fikambanana.
Azonao jerena eto ambany ny lahatsary notontosain'ny Arabo Mpamelona Fanantenana manasongadina ny asany:
Ampiasain'ny Irakiana ny tenirohy انطونا_قطعة_ارض#, izay midika hoe “omeo sombintany izahay” hanomezana ny feon'izy ireo hanohanana an'i al-Dhahabi sy ny fikambanany.
Amin'ny anarako sy amin'ny anaran'ny Irakiana rehetra manana konsiansy mangataka izahay ny hanomezana sombin-tany ho an'i Hisham al-Dhahabi.
Tsy mitaky zavatra tsy azo tanterahina i Hisham al-Dhahabi, mangataka zo fototra iray ho an'ny Ankizy Irakiana izy.
Tokony hanampy azy amin'ny fananganana orina mpanasoa feno ny governemanta satria hoavin'i Iràka ireo ankizy ireo ary mendrika ny ho tsara antoka.